Ebusuku Kwi-Ice House Unit 1 Lodge - I-Airbnb
Ebusuku Kwi-Ice House Unit 1 Lodge
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPhil
Abazingeli abasandul 'ukulungiswa bayabaleka kude nekhaya! I-Lodge yi-2 000 square feet enamagumbi okulala amabini. Igumbi lokulala lokuqala lineebhedi ezintathu ezikhweleneyo ezinamawele apheleleyo phezulu! Igumbi lesibini lineebhedi ezimbini ezipheleleyo. Igumbi lokuhlala elisegumbini eliphezulu kunye neesofa, i-resliner enye kunye ne-TV. Ikhitshi elincinci line-toaster oven, i-microwave kunye negrili ephandle. Ifumaneka kwidolophu ekufutshane neevenkile zokutyela neebhari! Andikwazi ukulinda ukuba utyelele Ebusuku E-Icehouse. Iyunithi 2 yiyunithi edumileyo, qesha kokubini ukuze yamkele iindwendwe eziyi-12.
Indawo yokuhlala enendawo yakho yokungena kuphela
I $ 400
Ilala Abantu Abayi-8
Izinto ezinokusetyenziswa ehotele
Iisofa ezimbini zeCatnapper ezine-complex enkulu
Indawo yebhari yeTV
Izitulo ezinkulu zokutyela 8
Ikofu yeMicrowave Keurig/
ikofu iyafumaneka Ifriji
Extras Boot closet kunye ne-closet lockers zemipu, izinto
ezilungisiweyo zehotele kunye ne-wifi yasimahla, umgama wokuya kwidolophu kunye neevenkile zokutyela! Isandul 'ukulungiswa, iyangena kwiyunithi 2 evumela indawo yokuhlala yeendwendwe eziyi-13 xa zizonke.
3 iibhedi ezilala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-3
Sisekufutshane neofisi yeStuttgart Chamber of Commerce kunye nedada elibiza i-amphitheatre. Indawo yokupaka neyokufikelela kwimyuziyam yezolimo yasekuhlaleni apho unokufumana khona imiboniso yembali yokuzingela idada.
Siyakuhlangana nawe ngesitshixo emva koko uvumele undwendwe lwethu ukuba luyonwabele ukuhlala apho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stuttgart